IGemalto ibonisa ikhadi letyala kunye nomfundi weminwe | Iindaba zeGajethi
Kancinci kancinci Iintlawulo ezihambayo ziyaqhubeka nokuzuza umhlaba jikelele. Kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi ezinje ngeTshayina, ii-smartphones sele sisixhobo sokuqala esisetyenziswa ngabasebenzisi xa besenza iintlawulo. Yiyo loo nto Sijongene notshintsho olubalulekileyo kwintengiso. Nangona, kwiimarike ezininzi zasentshona kwikhadi le khredithi iseyeyona ndlela ixhaphakileyo.
Nangona, okwethutyana Sibona indlela intlawulo «yokunxibelelana» iqhubela phambili. Ukhetho lokuhlawula ngekhadi ngokuzisa isixhobo lukhululekile kwaye lonke ixesha amanye amaziko anikezela olu khetho. Ke kujongeka ngathi lolu lwalathiso luhamba kwimarike.
Gemalto, igama elinokuvakala ngathi uvelisa i-SIM kunye namakhadi etyala. Ngoku, babhengeze uhlobo olutsha lwekhadi letyala. Imodeli yekhadi eya kuthi ivumele kuphela ukuhlawulwa kwiitheminali ezinganxibelelaniyo ngokwenza ukusetyenziswa kweminwe yethu.
Kunyaka ophelileyo uGemalto watyhila obu buchwephesha ukuphuhlisa amakhadi etyala ngenzwa yeminwe. Nangona kunjalo, ukukhula kwayo kuyacotha. Kodwa, inkampani ibheje kakhulu kolu phuhliso, ke baya kwenza yonke into eyimfuneko ukuyenza iphumelele. Ngoku, Inkampani yongeze i-NFC chip kolu hlobo lwekhadi. Ngale ndlela, inokusetyenziselwa kwiitheminali ezinganxibelelani ngaphandle kokusebenzisa iPIN.
Kule meko itekhnoloji ye Ukuchongwa akuyi kuxhomekeka kwiPOSkodwa kuxhomekeke ekhadini. Ukusukela xa uhlawula siza kufuna kuphela Sondeza ikhadi uze ubeke umnwe wethu kwisenzisi. Ngale ndlela ukuthengwa kugunyazisiwe. Inkqubo elula kakhulu. Inketho enokuthi ibe yimpumelelo kakhulu, njengoko zininzi ngakumbi iitheminali. Yintoni egqithisile, yenza ikhadi lamatyala elisebenzisa le nkqubo likhuseleke ngakumbi. Ukongeza, zombini inzwa yeminwe kunye nenzwa ye-NFC iya kuxhotyiswa ngamandla adluliswa yi-POS.
Eli khadi lekhredithi iyafumaneka ngoku kwiBhanki yaseCyprus. Eminye imimandla yehlabathi kulindeleke ukuba ijoyine i-2018. Ucinga ntoni ngale nkqubo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ikhadi lokuqala lokuthenga ngetyala elinomfundi ofunda ngeminwe ngoku liyinyani
I-DJI yazisa nge-XNUMXth Gen Osmo Mobile kunye noRonin S Gimbal weeKhamera zeDSLR
I-LG inikezela i-TV ye-OLED ye-intshi engama-65 intshi